Ndị okenye nwere ike ịga na trampoline 8ft? - Magazin ADL ➡
Ndị okenye nwere ike ịga na trampoline 8ft?
Ndị editọ ADL
Ihe na-akpali mmasị banyere 8 ụkwụ trampoline ụdị bụ na ha dị n'etiti n'etiti ọrụ dị arọ trampolines na obere trampolines maka ụmụaka. Ha bụ nnukwu ezu ohere ndị okenye ima elu, ma ka, ha nwere ike dị obere iji nye onye dị afọ 10 ọmarịcha oge.
N'otu aka ahụ, ụmụaka ole nwere ike ịwụli na trampoline ụkwụ iri na anọ?
Dị ka ọ dị na ngụkọta gara aga, 12 ft gburugburu trampoline ga- nye gị ihe dịka 93 sq ft of wụ elu mpaghara mgbe 14 ft ga- ihe dị ka 133 sq ft. 14 ụkwụ trampolines akwadoro maka ndị nọ n'afọ iri na ụma ma ọ bụ ezinụlọ nwere ọtụtụ ụmụ, n'ihi na nke a zuru ezu iji nabata ha niile, ma ọ bụrụ na ha kpebie ịme mgbatị ahụ ma ọ bụ egwu egwu ọnụ.
Ọzọkwa, Kedu nha trampoline ndị okenye nwere ike ịga n'ihu? Mini trampoline n'ihi na ndị okenye ma ọ bụ mini trampoline rebounders na-emekarị -abịa na 32″, 36″, 38″, 40″ na 49″. N'èzí trampolines -emekarị -abịa na 6ft, 7ft, 8ft, 10ft, 12ft, 14ft, 15ft, 16ft, na 17ft.
35 Ajụjụ na Azịza Yiri nke Achọtara?
Nye ga-ego onye 14 afọ?
Trampolin dị mma maka ịbelata ibu?
Skyzone na-akwụ ụgwọ kwa izu?
Kedu oge ịgba na Skyzone?
Gịnị ka kacha ibu ibu pụtara?
Afọ ole ka ịkwesịrị ịrụ ọrụ na Skyzone?
Kedu trampoline nwere ike ijide oke ibu?
Kedu ka ị si mara mma na ogige trampoline?
Ị nwere ike iyi jeans trampolining?
Mpaghara Sky ọ na-anwale ọgwụ?
Ego ole ka a na-akwụ gị n'ikuku ikuku?
Ego ole bụ elu maka elekere 1?
Ego ole ka trampoline 8ft nwere ike were?
Skyzone ọ na-ere nri?
Afọ ole ka ị ga-arụ ọrụ na PetSmart?
Kedu oke oke maka ibia?
Ego ole ka mddonalds na-akwụ otu awa?
Ndị okenye nwere ike ịwụli elu na elu?
Afọ ole ka ị ga-abụ ịbụ onye na-elekọta ego na Walmart?
Nwere ike ịrụ ọrụ na ụzọ ụgbọ oloko na 16?
Ị ga-eyi sọks na elu?
Ego ole ka ọ bụ maka awa 2 n'ikuku?
Ị nwere ike iyi uwe mkpirisi na Gravity?
Kedu ihe m ga-eyi maka ibia azụ?
Kedu ka m ga-esi tinye na Skyzone?
Nwere ike ịgbazite Skyzone?
Ego ole bụ inweta ikuku?
Kedu ihe nlekota ụlọ ikpe na-eme na Sky Mpaghara?
Ego ole ka ọ bụ maka otu onye na elu?
Kedu onye na-akwụ ụgwọ na 14?
McDonalds - Somefọdụ ebe McDonalds na-ewe ndị ọrụ afọ iri na anọ ọrụ.
Safeway - 14mụ afọ iri na anọ nwere ikike nwere ike ị nweta ọrụ na Safeway supermarkets dị ka akpa.
Taco Bell - Taco Bell na-ewekarị ndị ọrụ 14 na ndị okenye.
Baskin-Robins - Ngwunye ice cream a dị ka nwata dị afọ 14.
Ọ bụrụ na ị na-awụlikwa elu maka nkeji 30 kwa ụbọchị na a trampoline is dị mma maka ibu ibu. Ka ọ̀tụ̀tụ̀ obi gị na-adị elu - na-eche njakịrị, ịfụ ụfụ na ọsụsọ - ka ọ ka mma arọ ọnwụ nsonaazụ. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ibu uru nke na-azọda – Ọ dị mfe ime, ma magburu onwe ya maka arọ ọnwụ.
Lezienụ oge na Mpaghara Sky bụ Bi-Weekly.
Anyị enweghị afọ ịgba, ma anyị na-achọ ka ndị niile na-awụli elu wụpụ kpamkpam kpamkpam / enweghị enyemaka ma nwee ike ịgbaso ntuziaka dị mfe. Anyị na-akwado onye ọ bụla n'okpuru afọ nke 5 ịbịa soro anyị oge Toddler ma ọ bụ n'oge obere oge anyị dịka izu ụka ma ọ bụ ụtụtụ izu ụka.
Efere a na-egosi oke ibu ibu na / ma ọ bụ kacha ọnụ ọgụgụ ndị na ụgbọ mmiri nwere ike na-ebu n'udo na ezigbo ihu igwe. I kwesịghị ịgafe nke ahụ ekwuputara oke ibu ibu ma ọ bụ na kacha ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ. Nke kacha ibu bụ jikọtara ọnụ ibu ibu nke ndị njem, gia, na moto.
Ike Trampoline dị arọ: trampoline nwere oke ibu 300 lb na elu
Ikike ibu ibu
Acon Air 4.6 Trampoline 15 ft 800 lbs ?? 91 ??
Upper bounce trampoline akụkụ anọ 500 lbs 82
16′ Octagon Magic Circle Trampoline 450 lbs 81
Exacme TUV akwadoro Trampoline 375 lbs 85
Nkezi Mpaghara Mpaghara Sky Ikwu ugwo obula na United States bu ihe dika $ 8.81, nke bu 25% n'okpuru ala nkezi.
-eyi ala uwe
taa jeans Uwe adịghị mma maka ịwụba n'olulu ụfụfụ - ọbụlagodi na m. -eyi uwe na-ahapụ ị megharịa na ọsụsọ ntakịrị. Mkpirisi egwuregwu, yoga ogologo ọkpa na t-shirts bụ ezigbo nhọrọ. Ọ dịghị mkpa, mana lelee ihe ọchị ndị a trampoline agba na Amazon!
Arụ Ọrụ Manager
M gbara ajụjụ ọnụ na Mpaghara Sky. Enweghị mba ule ogwu ma ee e ule ma ọ bụ nyocha ndabere.
nkezi Ikuku Obodo Adventure Park oge obula ịkwụ ụgwọ àmà site na ihe dịka $ 8.02 kwa awa maka Nyochaa na $ 16.43 kwa elekere maka Mmemme Enyemaka. The nkezi Ikuku Obodo Salarygwọ ụgwọ Adventure Park sitere na $ 29,592 kwa afọ maka Kitchen Manager na $ 46,257 kwa afọ maka General Manager.
Ọnụ ego bụ: $10- 30 nkeji, $16- 1 Oge Awa, $21- 90 nkeji, $25- 2 awa. Cheta na Socks Safety Trampoline nwere njide ka achọrọ maka jumper ọ bụla.
Do ị ree nri na ihe ọ beụveraụ? Ee! Anyị nwere ọtụtụ nri na ọ drinksụ drinksụ dị maka ịzụta na mmanụ ụgbọala Mpaghara.
The njedebe oke maka anyị ibiaghachi Ụlọ dị n'etiti 1000-1200lbs.
McDonald Talọ oriri na ọ Ltdụ Ltdụ Ltd. na-akwụ ndị ọrụ ya ụgwọ otu nkezi nke ₤ 6.96 an awa. Oge awa kwuo ugwo na McDonald's Talọ oriri na ọ Ltdụ Ltdụ Ltd. sitere na ihe nkezi nke ₤ 5.08 ruo .9.53 XNUMX an awa.
Iwu ogige - nchekwa mbụ! Onye ọ bụla nke na-awụlikwa elu na trampolines anyị ga-ebu ụzọ nye ezigbo/binye aka elu Trampoline Park nkwụsị. Ndị na-erubeghị afọ 18 ga-enwerịrị nna ma ọ bụ nna ha ma ọ bụ onye nlekọta iwu bịanyere aka na nkwụghachi ụgwọ ahụ. Do ọ bụghị ima elu ọ bụrụ na ị dị ime ma ọ bụ nwee oke ahụike ndị ọzọ.
ọ dịkarịa ala 16 afọ
Mgbe ahụ gaa na Starbucks ebe ị masịrị gị ma nyefee ngwa. Iji ọrụ n'ihi na Starbucks ị ga-adịkarịa ala 16 afọ (ma e wezụga maka Montana ebe afọ kacha nta dị afọ 14). Retail ọkwá gị nwere ike itinye na Starbucks bụ Baristas na Mgbanwe Nlekọta.
Kpọta ndị enyi gị maka klọb kacha Air ahụmahụ na ima elu n'abalị pụọ. na- awa abụọ maka $15 ma ọ bụ awa atọ maka $20.
Ee! Anyị chọrọ onye ọ bụla jumper ka yiri sọks. Anyị na-akwado ịzụta jumps elu Safety Socks na ogige anyị maka $2 otu ụzọ. Nchekwa sọks nwere ike saa ara na re-eyi ma ọ bụghị chọrọ ka ima elu.
Maka $6 kwa nwa, ha nweta awa 2 nke oge ịwụ elu na ebe niile igwu egwu na inyocha PLUS okenye na-amali n'efu!
Ntuziaka uwe trampoline
T-uwe elu. T-shirts siri ike bụ ihe dị mkpa mgbe ị na-eleta ogige trampoline.
Enweghị Skirt. Skirt ma ọ bụ uwe bụ nnukwu 'mba-mba' ma a bịa n'ụbọchị ị na-agbago na trampoline.
Yoga Pants bụ n'ikpeazụ anabatara.
Yiri Slip On.
Ewetala nnukwu akpa ego.
Wepụ ihe ịchọ mma gị.
ndọda Kwado dobere ikike ịjụ nnabata na ogige ahụ nye onye ọ bụla so na ya we chere na ọ bụghị uwe kwesịrị ekwesị. Ọkọlọtọ kacha nta nke atụmanya na uwe koodu na-agụnye uwe elu na nịịka. Ndị niile sonyere kwesịrị ịhụ na ha wepụrụ ihe ịchọ mma niile tupu ha etinye aka na mmemme ọ bụla.
Anyị na-akwado uwe egwuregwu na ụfọdụ gbatịa. jeans akpa dị mma ma ọ bụ uwe ogologo ọkpa na uwe ogologo aka ka akwadoro. Akpụkpọ ụkwụ skate, akwa akwa na ụkwụ mechiri emechi ga a ga-eyi na X-Park. AKW .KWỌ sọks nwere njide dị mkpa iji zere ịpụ.
Lee n'okpuru maka oghere ọrụ dị, wee pịa "tinye" iji mejupụta ngwa gị.
Monitorlọ ikpe Nyocha. Monitorlọ ikpe Monitor ga-eso ndị ọbịa rụọ ọrụ ozugbo, na-enye nkwanye ugwu, enyi na enyi, na enyemaka ọkachamara mgbe ị na-agbaso ụkpụrụ nchekwa Sky Mpaghara.
Onye ọbịa mmemme.
Mpaghara Sky -enye an ebe mmemme iji nabata otu dị iche iche na ogo. Nwere ike ịgbazite ime ụlọ oriri na ọ orụ orụ ma ọ bụ ọbụna ụlọ ọrụ ahụ dum, dabere na mkpa gị. Nke anyi ụgwọ na nnọkọ ngwugwu na-eme ka ọ dị mfe ịhazi an ihe omume dị ịtụnanya maka otu ma ọ bụ otu gị, na - enwechaghị nchekasị ị.
The Monitorlọ ikpe Nyocha na-arụkwa ọrụ nhicha ma nyere aka na-elekọta trampolines, pads na ebe dị n'okpuru trampolines. Ndị na-enyocha ụlọ ikpe bụ ọrụ maka ichebe nchekwa nke onye ọ bụla na-eji ya Ogige Mpaghara Sky.
mgbatị ahụ, ego onwe onye, ezumike nká, egwuregwu
Kedu ebe 1 liter nke gas ga-eru gị?
Kedu ihe bụ ezigbo njem?